गार्सिलासो डे ला भेगा। उहाँलाई सम्झनका लागि उनका best सर्वश्रेष्ठ सोनेटहरू वर्तमान साहित्य
गार्सिलासो डे ला भेगा। उहाँलाई सम्झनको लागि उनका best सर्वश्रेष्ठ सोनेटहरू
गार्सिलासो डे ला भेगा, महान स्पेनिश पुनर्जागरण कवि, १ like1536 मा नाइसमा आजको जस्तो मृत्यु भयो। उनको जीवन, सैन्य षडयन्त्र र उपलब्धि को पूर्ण, संग एक प्रतिभा मा प्रतिस्पर्धा गर्दछ दुर्लभ तर आधारभूत काम स्पेनिश साहित्य मा। उसको सम्झनामा मैले उद्धार गरेको छु उनको स hisनेटको। यो याद गर्न।
1 गार्सिलासो डे ला भेगा
2 उसको काम
2.1 Sonnet V - तपाईंको इशारा मेरो आत्मा मा लेखिएको छ
2.2 Sonnet XIII - Daphne हतियार पहिले नै बढ्दै थियो
2.3 Sonnet IX - मेरी महिला, यदि म तपाईंबाट अनुपस्थित छु ...
2.4 Sonnet VII - जो यति धेरै गुमाएको छ कुनै अधिक हराउन ...
2.5 Sonnet XIV - कोमल आमा जस्तै, कि दु: ख ...
गार्सिलासो डे ला भेगा
उहाँ मा जन्मेको थियो Toledo, एक महान कास्टिलियन परिवार भित्र। सानै उमेरदेखि उनले कास्टाइलको राजनीतिक षडयन्त्रमा भाग लिए १ until१० सम्म उहाँ प्रवेश गर्नुभयो राजा चार्ल्स प्रथमको दरबारमा। उनले धेरै सैन्य र राजनैतिक लडाईहरुमा भाग लिए र सेनामा भाग लिए रोड्सको अभियान, १1522२२ मा सँगै जुआन बास्कनजसको उनी एक राम्रो मित्र थिए। १ 1523२XNUMX मा उनी नियुक्त भए स्यान्टियागोको नाइट र, केहि बर्ष पछि उनी कार्लोस पहिलोसँग सरे बोलोग्ना जहाँ उनी सम्राटको मुकुट लगाए।
उनले निर्वासन भोगे र पछि गए नेपल्स, जहाँ यो बसे। यद्यपि फ्रान्सेली प्रोभेन्समा मुयको किल्लामा भएको आक्रमणमा यो भएको थियो युद्धमा घातक चोटपटक। हस्तान्तरण पछि राम्रो आज जस्तै एक दिन मा मृत्यु भयो 1536.
उनको सानो काम जुन संरक्षित गरिएको छ, लेखिएको छ 1526 y 1535 प्रविष्टि गर्नुहोस्, एक तरीकाले प्रकाशित भएको थियो मरणोत्तर सँगै जुआन बॉस्कोनको शीर्षक अन्तर्गत गार्सिलासो डे ला भेगाका केही बास्कनका कार्यहरू। यो पुस्तकको उद्घाटन स्प्यानिश पत्रहरूमा साहित्यिक पुनर्जागरण। इटालियन कवि र मेट्रिक्सको प्रभाव उनको सबै काममा खुल्लमखुल्ला देख्न सकिन्छ र गार्सेलासोले तिनीहरूलाई क्यास्टेलियन मिटरमा धेरै राम्रो नतीजाहरूका साथ ढाल्यो।
सामग्री को मामला मा, धेरै कविताहरु प्रतिबिम्बित ठूलो जोश पोर्तुगाली महिलाको लागि गार्सेलासो द्वारा इसाबेल फ्रेरे। उनले १ 1526२1533 मा उनलाई अदालतमा भेटे र १ XNUMX मा उनको मृत्युले उनलाई गहिरो प्रभाव पा .्यो।
म यी छनौट गर्दछु Son सोनेट 40 को बाहेक, जसले लेखेका थिए Ec ईक्लोगहरू.
Sonnet V - तपाईंको इशारा मेरो आत्मा मा लेखिएको छ
तपाईंको इशारा मेरो आत्मामा लेखिएको छ,
र म तपाइँको बारेमा कत्ति धेरै लेख्न चाहान्छु;
तपाई आफैले यो लेख्नु भएको थियो, म पढ्छु
यति एक्लो, कि तपाईं को पनि म यस मा आफूलाई राख्छु।
यसमा म हुँ र सँधै हुनेछु;
यद्यपि यो ममा फिट हुँदैन तर म तपाईंमा कती देख्छु,
मैले सोचेको भन्दा धेरै राम्रो कुरा के म लाग्छ,
बजेटको लागि विश्वास लिएको छ।
म तपाईंलाई माया गर्न बाहेक जन्मिएको होइन;
मेरो प्राणले तिमीलाई त्यसको नापमा कटौती गरेको छ।
आत्माको बानीबाट बाहिर म तपाईंलाई माया गर्छु।
मसंग म तपाईंको कति essणी छु भनेर स्वीकार्छु;
म तिम्रो लागि जन्मिएको थिएँ, तिम्रो लागि मसँग जीवन छ,
तिम्रो लागि म मर्नु पर्छ, र तिम्रो निम्ति म मर्नेछु।
Sonnet XIII - Daphne हतियार पहिले नै बढ्दै थियो
Daphne हतियार पहिले नै बढ्दै थियो,
लामो लामो हाँगाहरूमा उनले आफूलाई देखाए।
हरियो पातमा मैले देखे कि तिनीहरू बनिए
कपाल जुन सुनको अँध्यारो भयो।
तिनीहरूले कफको बोक्राले छोपे
कोमल अंगहरू, अझै उमालेको थियो:
सेतो खुट्टा भुइँमा लडे,
र तिनीहरू टेढो जरामा परिणत भए।
ऊ यस्तो क्षतिको कारण थियो,
रोएको आवाजले, म हुर्कें
यो रूखले आँसुले पानी पिलायो।
ओ दयनीय अवस्था! ओह खराब आकार!
त्यो रुँदै प्रत्येक दिन बढ्छ
कारण र किन उनी रोए!
Sonnet IX - मेरी महिला, यदि म तपाईंबाट अनुपस्थित छु ...
मेरी महिला, यदि म तपाईंबाट अनुपस्थित छु भने
यस कठिन जीवनमा र म मर्दिन,
यस्तो देखिन्छ कि मैले जे माया गर्छु त्यसलाई नै चोट पुर्याउँछु।
र राम्रो हुन कि उनी उपस्थित हुन रमाए।
यस पछि म अर्को दुर्घटना महसुस गर्दछु,
जुन यो हो कि यदि म जीवनबाट निराश छु भने,
मैले तपाईबाट धेरै आशा गरेको छु भनेर
र त्यसैले म भिन्न महसुस हुने कुरामा हिँड्छु।
यस भिन्नतामा मेरा इन्द्रियहरू
तिनीहरू तपाईंको अनुपस्थिति र जिद्दीमा छन्,
मलाई अब त्यस्तो आकारमा के गर्ने भनेर थाहा छैन।
म तिनीहरूलाई एक अर्कोसँग तर अनौंठो अवस्थामा कहिल्यै देख्दिन;
त्यस्तो कलाको बारेमा उनीहरूले रातदिन संघर्ष गर्छन्,
तिनीहरू केवल मेरो क्षतिमा सहमत छन्।
Sonnet VII - जो यति धेरै गुमाएको छ कुनै अधिक हराउन ...
कसले यति धेरै गुमाएको छ अब हराउने छैन,
पर्याप्त, माया, मलाई के भयो;
मैले कहिले पनि प्रयास गरेको छैन
तपाईले चाहानु भएको भन्दा मलाई बचाउनु
मैले तिम्रो मन्दिर र यसका पर्खालहरू लगाएको छु
मेरो भिजेको लुगाहरु र सज्जित,
यो पहिले नै भाग्यो जो को हुन्छ
आँधीबेहरीबाट स्वतन्त्र जुन म देखिएको थियो
मैले कसम खाएको छु कि फेरि कहिल्यै प्रवेश गर्ने छैन।
मेरो शक्ति र मेरो सहमतिमा,
अर्को त्यस्तो खतरामा, व्यर्थ।
तर के आउँछ म प्रयोग गर्न सक्दिन;
तर म शपथ खानु अस्वीकार गर्छु।
यो न त अरु जस्तो हो न मेरो हातमा।
Sonnet XIV - कोमल आमा जस्तै, कि दु: ख ...
कोमल आमा जस्तै, कि पीडा
छोरा रुँदै उहाँलाई सोध्छ
केहि, जो खाने
उसलाई थाहा छ कि खराबीलाई उसले पक्रनु पर्छ,
र त्यो पवित्र प्रेमले उसलाई अनुमति दिँदैन
त्यसो गरिरहेको क्षतिलाई विचार गर्नुहोस्
उसले उसलाई के गर्न सोध्छ, ऊ दगुर्छ,
रुनु र दुब्ती दुर्घटनालाई शान्त गर्नुहोस्
त्यसैले मेरो बिरामी र पागल विचार गर्न
उसले आफ्नो क्षतिमा उसले मलाई सोध्यो, म चाहन्छु
यस घातक मर्मतसम्भार हटाउनुहोस्।
तर मलाई सोध्नुहोस् र हरेक दिन रुनुहोस्
यति धेरै कि ऊ म चाहन्छु म उहाँसँग सहमत छु,
आफ्नो भाग्य बिर्सदै छ र मेरो पनि।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » कविता » गार्सिलासो डे ला भेगा। उहाँलाई सम्झनको लागि उनका best सर्वश्रेष्ठ सोनेटहरू
ग्रह पुरस्कार २०१:: हामी अन्तिम कार्यहरूको प्लट प्रकट गर्दछौं।
कार्लोस अर्निचेस। प्रहसन र एसिड हास्य को मास्टर।